तत्वों को आयोनलाइजेशन एनर्जी
तपाईलाई आयनन ऊर्जा बारे जान्न आवश्यक छ
Ionization ऊर्जा , या आयनन क्षमता, एक गेसस परमाणु या आयन देखि एक इलेक्ट्रन लाई हटाउन को लागि आवश्यक ऊर्जा हो। अधिक र अधिक कसकर बाँधिएको एक इलेक्ट्रोन न्यूक्लियस हो, यो हटाउन गाह्रो छ, र यसको आयनन ऊर्जा उच्च हुनेछ।
Ionization ऊर्जा को लागि एकाइहरु
इमेजलाइजेशन ईनन इलेक्ट्रोनिक्स (ईभि) मा मापन गरिन्छ। कहिलेकाँही जेलर / मोल मा डोलर आयनन ऊर्जा व्यक्त गरिन्छ।
पहिलो बनाम पछि आयननकरण ऊर्जा
पहिलो ionization ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन आमाबाबु को परमाणु हटाउन आवश्यक ऊर्जा हो। दोस्रो आयनन ऊर्जा ऊर्जा को एक द्विआधुनिक आयन को रूप मा, र यति मा बनाउन को लागि uniform आयन देखि दोश्रो वैल्यून को हटान को आवश्यकता को लागि आवश्यक ऊर्जा हो। सफल आयनन ऊर्जा बढ्छ। दोस्रो आयनन ऊर्जा सधैं पहिलो आयनन ऊर्जा भन्दा ठूलो छ।
आवधिककरण ऊर्जा ट्रान्समेन्टले आवधिक तालिकामा
आयनिकरण ऊर्जाले बायाँदेखि दायाँसम्मको अवधिमा बढ्दै जान्छ (घट्दो परमाणु त्रिज्या)। आयनन ऊर्जाले कम समूहलाई कम गर्छ (एटमिक त्रिज्या बढ्छ)।
समूह म तत्वहरुमा कम आयनन ईनलाइजेशन छ किनकी एक इलेक्ट्रन को हानि एक स्थिर ओक्टेट को रूप मा बनािन्छ। ईलेक्टिक त्रिज्या को रूप मा एक इलेक्ट्रन हटाउन को लागि यो कठिन हो किनकी इलेक्ट्रन सामान्यतया न्यूक्लियस को करीब हो, जो पनि अधिक सकारात्मक चार्ज हो। एक अवधि मा उच्चतम आयनन ऊर्जा मूल्य यसको महान ग्याँस को हो।
Ionization ऊर्जा को सम्बन्धित शर्तें
जब ग्यास चरणमा परमाणु वा अणुहरू छलफल गर्दा "आयनन ऊर्जा" वाक्यांश प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ अन्य प्रणालीहरूको लागि उपयुक्त शर्तहरू छन्।
कार्य प्रकार्य - कार्य प्रकार्य ठोस सतहबाट विद्युत् हटाउन न्यूनतम ऊर्जा चाहिन्छ।
इलेक्ट्रोन बाध्यकारी ऊर्जा - विद्युत् बाध्यकारी ऊर्जा कुनै पनि रासायनिक प्रजातिहरु को ionization ऊर्जा को लागि एक सामान्य सामान्य शब्द हो।
यो अक्सर तटस्थ परमाणु, परमाणु आयनों, र polyatomic आयनों से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा मूल्यों की तुलना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
क्रिसमस ट्री हल्ट टूथपेस्ट रसायन विज्ञान
बीटा Decay परमाणु प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया उदाहरण समस्या
रसायन विज्ञान मा कोललोड उदाहरण
इलेक्ट्रोनिक माइक्रोस्कोपको परिचय
विज्ञान चित्र क्विजेस
Distilled and Deionized Water between the Difference
मजेदार तिल दिवस मजाक र हास्य
ज्वाला टेस्ट रंग - फोटो गैलरी
प्रतिक्रिया उदाहरण उदाहरण समस्या
हेनरीको कानून उदाहरण समस्या
परम्परागत लैटिन मास र नोभस ओर्डो बीचको ठूलो परिवर्तन
9 सुँगुरको लागि अलग-अलग कलमहरू बनाउन2चक्कुहरू प्रयोग गर्नुहोस्
कसरी आफ्नो आफ्नै घरको फायरवर्कहरू फ्यूज बनाउने
संलग्न वा ध्यान पहिलो प्राथमिक शिक्षा हो
सूक्ष्म आर्थिक अर्थशास्त्र Macroeconomics
2016 स्मार्ट किल्वो फोटो गैलरी
Zenvo ST1 प्रोफाइल
एन्टिथेसिस (व्याकरण र बयान)
सम्मोहन के हो?
भिन्नता र मानक विचलन
"यदि म ब्रेकिंग बाट एक दिल रोक सकते हो": एमिली डिकिन्सन को बुझन
अफ्रिका-अमेरिकी इतिहासको परिभाषा कसरी विकसित भएको छ
रानी विक्टोरियाको अवधारणामा हेमफिलिया
इलेक्ट्रोनिक वोल्ट रूपांतरण उदाहरण समस्या को लागि Joule
ओबर्लिन कलेज जीपीए, एसट र एक्ट डेटा
किन पिंग पोंग बलहरू ज्वालामुखी छन्
इतिहास र शैली गाइडको कराटे र यसको प्रकार
रैंडी ट्रेविस 'ग्लोरी ट्रेन - गीतको विश्वास, उपासना र प्रशंसा'
सीरियामा के भयो?
फरिसीहरूको प्रोफेसर येशूका सुसमाचारका सुसमाचारका यहूदी यहूदीहरू
20 मजेदार र हराएको पालतू पोस्टरहरू
एक पूल क्यू चयन गर्दै
शमूएल एल जैक्सन "ब्ल्याक सांप मोन" छलफल
मजेदार Joe Biden Memes र चित्रहरू
कलेजमा कसरी स्नान गर्ने?